Ubuntu အမေးအဖြေများ - MYSTERY ZILLION
June 2010 edited March 2011 in Ubuntu
Ubuntu နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Post တွေ လတ်တလောမှာလဲ တင်နေကြတယ်။ Thread ရှိပြီးသားလေးတွေလဲရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေ သီးသန့်လုပ်လို့ရအောင် ဒီ Thread တင်လိုက်တာပါ။
ကျနော်ကတော့ ဒိုင်ခံမေးမှာပါ ၊၊၊၊
Ubuntu မှာ software တွေ install လုပ်နည်း pdf file ရှိမလား။
software တွေကို install လုပ်တာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလားမသိဘူး။ ZawGyi Font ကို install လုပ်တာရသွားပြီ။ Firefox ကိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပြန်ဘူး။
ခု ကျနော် Firefox 3.6.3 ဒေါင်းချထားတယ်။ firefox-3.6.3.tar.bz2 ပေါ့။
အဲဒါကို Extract တော့လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ပြီးတော့ Install ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။
Googling လုပ်ကြည့်တော့ sudo apt-get install firefox-3.6 အဲလိုလုပ်ပါဆိုလို့ Terminal မှာ ရိုက်လိုက်တာ Firefox ကို Install လုပ်သွားလေရဲ့။
ခုတော့ နောက်ဆုံးထုတ်မီးမြေခွေးလေးသုံးနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ခုမသိတာက Windows မှာဆို Firefox - Tool - Option ထဲသွားပြီးပြင်စရာတွေပြင်လို့ရတယ်။
Ubuntu ရဲ့ Firefox မှာတော့ Tool အောက်မှာ Option မပါလာဘူးဗျာ။ အဲဒါ Network Setting, Saving Setting, Clear Cookie History, Etc. စတာတွေကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။
VMware for Linux လဲ Desktop ပေါ်မှာ ကူးပြီးသွားပြီ၊
Install မလုပ်တတ်သေးလို့ပါဗျိုးးးးးးးးးး :cool:
နောက်လူတွေ လုပ်ရလွယ်အောင်လုပ်နည်းကို ဒီမှာပဲ တစ်ခါထည်းရေးထားလိုက်တော့မယ်။
ညွှန်ပြပေးတဲ့ ကိုစူနလိပ်၊ သင်ပြထားတဲ့ ကိုကိုရဲ တို့ကို ကျေးဇူး အကြီးကြီးတင်ပါကြောင်း
VMware ဆိုတဲ့ဖိုဒါတစ်ခုကို Desktop မှာထားပြီး install ဖိုင်တွေကို အဲဒီထဲမှာထားလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ Terminal ကိုဖွင့် (Applications --> Accessories --> Terminal)
sudo chmod +x *.bundle (Root အနေနဲ့ .bundle အကုန်လုံး executable လုပ်မှာပါ)
ls ( ls နဲ့ကြည့်ရင် VMware ဖိုဒါထဲမှာရှိတဲ့ install ဖိုင်ကိုတွေ့မှာပါ - eg. a.bundle )
sudo sh a.bundle ( a.bundle နေရာမှာ ကိုယ်တွေ့တဲ့ ဖိုင်nameပါ )
ဒါဆိုရင် Extract ဖြည်သွားပြီး လုပ် install လုပ်လို့ရပါပြီ။
အရင်တုံးက ကျွန်တော်လည်း ပျောက်ခဲ့ဖူးသပေါ့ Edit Menu အောက်မှာရှာပါ
Linux မှာက Option က Edit Menu အောက်မှာ ပါလေ့ရှိတော့ Firefox လည်းသူ့ရဲ့ Menu ကို Edit အောက်မှာထားပါတယ်။
Thanked by 1 kothway
Linux သမားတွေ မလာသေးခင် အရင်လွယ်တာ ဝင်ပြောခဲ့မယ်နော် Software Install လုပ်တာက အများအားဖြင့် Open-Source မှန်ရင် လွယ်လွယ်ထည့်လို့ရပါတယ် အလွယ်ဆုံးပြောရရင် Application အောက်မှာ Ubuntu Software Center ကိုသွားလိုက်ပါ အဲဒီ့အထဲမှာ ရနိုင်တဲ့ Software List ရှိပါတယ် အဲဒီ့အထဲက Install လုပ်လိုက်တာ ကလစ်အိုကေဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ Terminal ထဲကဆိုလည်း apt command ကိုသုံးပြီး Install လုပ်ယူလို့ရပါတယ် အဲဒါကတော့ ကိုယ် Install လုပ်ချင်တဲ့ Application ကိုသိဖို့လိုပါတယ် အရေးကြီးတာက Internet ရှိဖို့လိုပါတယ်။
မူရင်ဆိုက်ကနေ Download လုပ်ပြီးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ချို့ Installer များက အထဲမှာ Install လုပ်ပေးမယ့် Script တွေပါတတ်ပါတယ် တစ်ချို့လည်း GUI Installer ပါတတ်ပါတယ် အဲဒါတွေကို Run ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် Install လုပ်လို့ရပါတယ် ဘယ်လို Install လုပ်ရမယ်ကတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူတတ်ပါဘူး အကောင်းဆုံးကတော့ သူ့ရဲ့ Package ထဲမှာ readme ပါလာမှာသေချာပါတယ် အဲဒါကိုသာဖွင့်ပြီး အသေအချာဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။ စပြီးသုံးတဲ့အချိန်မှာ အကြံမပေးချင်တာက Source Code ကို Compile လုပ်ပြီး Install မလုပ်ပါနဲ့ အဲဒါကတစ်ခါတစ်ရံမှာ Dependency တွေရှိတတ်ပါတယ် Dependence Module တွေ Install မလုပ်ထားရင် Compile လုပ်လို့မရပါဘူး။ အဲဒီတော့အလွယ်ဆုံးက Ubuntu Software Center or apt ကိုပဲသုံးပြီး စပြီး Install လုပ်ကြည့်ပါ ကိုအလက်ဇန်းဒါးရေ။
view ထဲက preference လား ဒါမှမဟုတ် ကိုလူပျိုကြီးပြောသလို ပဲ edit ထဲက preference တော့မသိဘူးဗျှျ prefernce ကတော့သေချာတယ်
အရင်ဆုံး ubuntu tweak ကို install လုပ်ပါ သူကို install လုပ်ပြီးရင် software list တွေတော်တော်များများပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အဲဒီအခါကြရင် GUI ကနေ install လုပ်လို ့ရပါပြီ
ubuntu tweak install လုပ်နည်းကိုတော့
နောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ubuntu နဲ ့internet သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းမြန်အောင် IPV6 ကို disable လုပ်ဖို ့လိုပါတယ်
Jaunty Jacklope ဆိုရင်တော့ ကို Mark နဲ့ကို Box02 တို ့ဘလော့မှာရှိမယ်ထင်တယ်
karmic koala ဆိုရင်တော့
lucid lynx ဆိုရင်တော့ မစမ်းရသေးပါ
အောက်ကလင့်မှာ VMware install လုပ်တာကို ကိုရဲရေးပေးတာတွေ ့လို ့ညွန်းလို်က်ပါတယ်
အား --- ဟုတ်တယ် ကိုလူပျိုရေ
Edit အောက်က Preferences က Option ပဲကိုးဗျ။
မေးစရာတွေကုန်သွားတဲ့နေ့ကျရင် ဂဂဿါမြစ်ထဲကိုလွှတ်ပေးမယ်နော် ၊၊၊၊ :d
အိ! မဟုတ်ဘူး ပြင်ချင်ရင်... Firefox>Edit>အောက်မှာ ရှိတယ်လေသိလား။ ပရီဖားရမ်(မပေါင်းတတ်ဘူး ဟိ)
Ubuntu မှာ system proxy ပေးထားရင် ဒီကောင်က အဲဒိပရောက်စီကို အော်တို ၀င်သုံးတယ်လေ။သိယား
လုပ်ကြည် ့။ ။
ကျနော်လည်းတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်။ Ubuntu မှာ exe file တွေ Run အောင် wine package ကို install လုပ်ရင်ရတယ်လိုကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီ wine ဆိုတာကြီးကို ဘယ်နေရာကနေဒေါင်းပြီးဘယ်လို install လုပ်ရပါမလဲ။ ကျနော်က
Ubuntu 9.04 ကို offline အနေနဲ့သုံးပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးကြပါ။:frown:
ဘာလုပ်ချင်တယ်လို့ ဒီလိုသေသေချာချာမေးရင် ဖြေလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ Wine ကိုသုံးရတာ Install လုပ်ရတာမခက်ပါဘူး On-Line ဆိုရင် sudo apt-get install wine ဆိုရင်တစ်ခါတည်း ကိစ္စပြတ်တယ် အခုက Off-Line ဖြစ်နေတော့ deb package ကိုဒေါင်းရလိမ့်မယ် အောက်မှပြထားတဲ့ လင့်ကိုသွားပြီးတော့ Wine package ကို Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင့်လျော်တဲ့တစ်နေရာမှာထားပြီးတော့ sudo dpkg -i your_file_name.deb ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။
သုံးတာကလည်းလွယ်ပါတယ် သုံးတာကတော့ ရေးနေရင်မျက်စိရှုပ်တယ် သူများရေးထားတဲ့နေရာမှာ သွားကြည့်လိုက်တာ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် သူကပုံနဲ့ပြထားပြီးသားပါ။ exe တွေတိုက်ရိုက် run ချင်တာသော်လည်းကောင်း installer တွေကို install လုပ်ချင်တာသော်လည်းကောင်း သူပြောထားသလို permission ကို execute လုပ်လို့ရအောင်ပေး open with မှာ Wine ကိုရွေးပေးထားရင် အဆင်ပြေပါတယ် Installer နဲ့ Install လုပ်ပြီးရင်တော့ Applications > Wine > Program File မှာ Install လုပ်ပြီးသား တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ permission ပေးတာတို့ open with တို့ကို Screen shot နဲ့ကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ Wine နဲ့ Window Program တော်တော်များများ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး တစ်ချို့ Program တွေရချင်မှရပါလိမ့်မယ်။
99poison wrote: »
WINE နဲ ့အလားတူ PlayOnlinux ရယ် Crossover ရယ်ရှိပါတယ် crossover ကတော့ ပိုက်ပိုက်နဲ ့ပါ PlayOnlinux ကတော့အခမဲ့ပါပဲ wine နဲ ့ဘာကွာလဲကတော့ စမ်မသုံးဖူးလို ့မသိဘူးခင်ဗျ
PlayOnlinux က Wine ပါပဲ အတူတူပဲ Wine ကိုတိုးချဲ့ထားတာပါ။ သူကနည်းနည်းပိုထူးတာက Application တစ်ခုအတွက် Isolated Environment လုပ်ပေးထားတော့ တစ်ခြား Application နဲ့ Shared Library တွေရှိခဲ့လို့ ပြဿနာဖြစ်တာတွေမရှိအောင် ခွဲထားပေးတာပါ တစ်ခုမကောင်းတာက Application တစ်ခုအတွက် VirtualDrive တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Library တူတာတွေလည်း အခါခါ Install လုပ်တဲ့အတွက် Storage Space ပိုကုန်ပါတယ်။
ubuntu 9.10 ကနေ 10.04 ကို upgrade လုပ်လိုက်တာ boot ပြန်တက်တော့
ဆိုပြီးပေါ်နေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ကူညီပေးကြပါအုံး
luyogyi wrote: »
ဒါမျိုးတော့မကြုံဖူးဘူးဗျ ရမ်းပြီးတော့ အကြံပေးကြည့်ပါဦးမယ် ဘာမှတက်မလာမှတော့ LiveCD နဲ့ Boot လုပ်ပြီးကြည့်မှရမယ်ထင်တယ် Grub configuration ပြဿနာပဲဖြစ်မှာပါ။ grub.cfg ကိုပြင်ကြည့်ရင်ရမယ်ထင်ပါတယ် အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်ရမ်းတုတ်လိုက်ရင် ပြဿနာတက်မှာစိုးရတယ်
အပေါ်ကလင့်မှာ Reinstalling GRUB2ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သွားဖတ်ပြီးသာကြည့်လုပ်ပေတော့ အဲဒါတွေကစမ်းကြည့်ပေးလို့မရဘူး တစ်ခြားကိစ္စဆိုရင် စမ်းကြည့်ပေးပါတယ်ဗျာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့စက်ဆိုတော့ အဲဒီ့ကိစ္စတော့ ကျွန်တော်လုပ်ခွင့်မရှိဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ။
ကို Alexander တစ်ယောက်ထဲမေးနေတော့ သူလဲအားနာလာမှာပေါ့...
အဟတ် ... ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမေးချင်လို့ ... အခု ကျွန်တော့်မှာ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်... ကျွန်ပျူတာစဖွင့်ဖွင့်ချင်း Boot တက်ပြီးရင် Ubuntu နဲ့ Window နဲ့တစ်ခုတွဲပေါ်တယ်ဗျ.. အရင်တုန်းကပါ....
Ubuntu with ....
Ubuntu with ... (Recovery Mode)
Window Vista Recovery Mode
Window Vista Loader ဆိုပြီးတော့ ... Ubuntu ချည်းပဲနှစ်ခုထပ်နေတာ... အဲ့ဒါ
ဆိုတဲ့ နှစ်ကြောင်းကို မပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ??? Boot စစတက်တက်ချင်း အရင်ကနဲ့မတူလို့လားမသိဘူး .. အသည်းကိုယားနေတာပဲ .... ဟင်းဟင်း ...
Kernel ကို update လုပ်လိုက်လို ့ထပ်သွားတာပါ အမှန်မှန်ကတော့ Grub မှာပြင်ရမှာ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်များတယ်ဗျ ဒါကြောင့် ubuntu tweak မှာ clean kernel ဆိုတာပါတယ် အဲဒိ feature က kernel အဟောင်းကိုဖျက်ပေးပါတယ် အဲဒီ feature နဲ ့ဆိုအဆင်ပြေသွားမှာပါ
နှစ်ခုအတူတူတော့ မထပ်လောက်ပါဘူး Kernel Version တော့ကွဲမှာပါ အဲဒါက Upgrade လုပ်ပြီးရင်ဖြစ်နေကျပါ။ ပုံမှန်ကတော့
နဲ့ menu.lst ကိုဖွင့်ပြီးကိုယ်မလိုချင်တဲ့ အပိုင်းကိုဖျက်လိုက်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Grub2မှာဆိုရင်တော့ မသုံးတော့တဲ့ Kernel တွေကို Remove လုပ်လိုက်ရင်လည်း menu ကနေ auto remove လုပ်သွားပါတယ်။ Ubuntu 9.10 နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ System > Administration > Synaptic Package Manager ထဲကနေ မလိုတော့တဲ့ Kernel အဟောင်းတွေကို Right Click နှိပ်ပြီး Complete Remove လုပ်လိုက်ပါ အဲဒါဆို နောက်တစ်ခါတက်ရင် အဲဒီ့အဟောင်းတွေ မပါလာတော့ပါဘူး။
wine သုံးတာအဆင်ပြေပါတယ်။အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးကိုလူပျို။ ကျနော်နောက်တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါသေးတယ်။တချို့ deb package တွေကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်ရင် Error: Dependency is not satisfiable: libopenal1 ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါဦး။
အဲဒါက dependency package တွေလိုအပ်တယ်။ internet နဲ့ ဆိုရင် apt-get နဲ့ သွင်းရင် လိုအပ်တာတွေ အလိုလို သွင်းပေးသွားတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ package တွေကို တစ်ခုခြင်းဆီ လိုက်သွင်းရလိုက်မယ်။ အခု ပြထားတဲ့ error ဆိုရင် libopenal1 deb သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ deb package တွေ စုထားတာကို သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့
ဟုတ်တယ် အဲဒီ့ dependency ကလည်းပြဿနာရယ် တစ်ချို့တွေကတော့ ဘယ်ဟာတွေ dependence ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောထားတယ် မပြောထားပဲ install လုပ်မှဖြစ်ရင်အတော်လေး စိတ်ပျက်ရတယ် အင်တာနက်မရှိလို့မှ ဒီအတိုင်းယူလာပါတယ်ဆို လိုတယ်ဆိုတော့ ထပ်သွားရပြန်တယ် အဲဒါနဲ့ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်တာပဲ ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်အကုန် Install လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ စေတန်ပြောသလို အကုန်လုံးကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်စုထားလိုက်တာ အဆင်ပြေမယ်ဗျ။
Ubuntu မှာကျွန်တော့cdrom သုံးလိုမရတော့လို့ပါ။
ubuntu ကို offline update လုပ်ချင်ပါတယ်.....
ဘယ် လိုလုပ်ရမလဲ မသိလို့
အန်.. offline update ? update ပါဆိုတော့ offline ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်မှာတုန်း.. ရှိတဲ့ နည်းကတော့ Ubuntu သုံးတဲ့ သူတစ်ယောက်က Update လုပ်ထား။ ပြီးရင် Package အားလုံး DVD ထုတ်ပြီးပေး။ အဲဒါကို ကိုယ်ကယူပြီး update လုပ်ရင်တော့ ရတယ်။
ဘာ error message ပြလဲမသိဘူး။ ?
ကျနော် VMware တင်တာ ချောချောမောမောပဲ တင်လို့ပြီးသွားတယ်ဗျ။
ဒါပေမဲ့ ... Run တော့
ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်။ အဲဒါကို install လုပ်တော့
ကြုံဖူးသူများ ပြောပြပေးပါဦးလို့ ...............
File အောက်မှာလား Edit အောက်မှာလားမသိဘူးရှိလိမ့်မယ် အောက်ဆုံးနားမှာပဲ ...
virtual box ကို စမ်းပြီးသွင်းကြည့်ပါလား။ VMWare ကို Ubuntu မှာ မစမ်းဖူးဘူး။
အမိန့်တော်မြတ်အတိုင်းပါ ဖလား .... :d ဟီး
VM ware နဲ ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့Ubuntu ထဲကို VM ware software အင်စတောလေးရှင်းလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျား။ ။အဲဒါမှာ Graphic card ကိုရှဲပေးတုံးတာပါ။မီဟုတ်ရင် မီရပါဘူး။
အနော်တုံးက အကိုတစ်ယောက်သွင်းပေးသွားတာ ရတယ်။ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကျတော install.py ကိုရှာမတွေ ့တာနဲ ့.. Dual boot ပဲလုပ်လိုက်ရတယ် ဟိဟိ ။
V-BOX မှာလည်း ထိုနည်းငှင်းပါပဲ။မဟုတ်ရင် မရပါဘူး။ ။
package တွေကို clear မလုပ်ထားရင်တော့cache file အောက်မှာ သွားစုနေတတ်ပါတယ်။အဲဒီကောင်တွေကို စုပြီးအခွေဘန်းထားလိုက်ပါ။
offline update နည်းများစွာရှိပါတယ်။ကိုကိုရဲ ဆီမှာလည်းမေးလို ့ရပါတယ်။အနော်ကတော့အွန်လိုင်းအက်ဒိတ်လုပ်တာများလို ့မသိဘူးလေ။
နောက် offline update လုပ်တဲ ့ဟာတစ်ခုကတော ့အောက်ပါလင့်မှာသွားဖတ်ပါ။ကွန်မကောင်းလို ့ဘာသာမပြန်ပေးနိုင်တာ စိတ်မရှိပါနဲ ့။ ။
MZ က အစ်တိုတို့ရေ ...
အနော့် Ubuntu မှာ Online update လုပ်တာ error ပြနေပါတယ်... Fetch Error ဆိုပြီးတော့... Lucid Lynx မှာပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူး ... Internet ကျတော့ သုံးလို့ရတယ်ဗျ... အခုဆို Ubuntu မှာ update မလုပ်ရတော့ သိပ်မမိုက်ဘူး ... VLC player တွေကော ... Wine ကော .... တော်တော်လေးကို မလုပ်ရသေးပါဘူး .. ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ Update လုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးကြစေချင်ပါတယ်ဗျ..
check your network proxy
Network Proxy ကအဆင်ပြေတယ်ဗျ ... Firefox တောင်သုံးလို့ရနေသေးတဲ့ကိစ္စကို ... သုံးလို့ရတာမှ One-Click လားတောင် မှားရတယ်...
Sources.list ထဲမှာ များမှားနေတာလား? မပြောတတ်ဘူးဗျ... ကူပါအုံး ...
ဟုတ်ကဲ့ ကိုစေတန်. .. ဒါပေမယ့် မရ၀ူးကော .. ???? ဟူး .. ဘယ်နားမှားနေသလဲမသိ .. အနော်က ကလိတတ်တာနဲ့တော့ ... နောက်တစ်မျိုးစမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်
ပြီးရင် ... သူက 0% ဆိုပြီးပေါ်တယ်... နောက် သိပ်မကြာခင် Fetch ... ဘာညာကွိကွ .. နေကြာကွာစေ့လုပ်တာ.. အဟတ်
တစ်ယောက်တစ်မျိုး အကြံပေးကြတာ အကြံကုန်လောက်ပြီ ကောင်းတာက ခင်ဗျားတက်တဲ့ Error Message တွေကို ကူးပြီးတင်ပေးပါ အဲဒါမှဖြစ်နိုင်တာကို ပိုပြီးစဉ်းစားလို့ရကြမယ် အခုကအားလုံးက မှန်းပြောနေရသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ Network Proxy ကို Configure လုပ်ထားတာသေချာပါသလား Firefox နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာက Network Proxy ကို Configure မလုပ်ထားလည်း Firefox မှာ Proxy Configure လုပ်ထားလို့သုံးလို့ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
update lock ကျတာလားမသိဘူး။ ကျနော်ထင်တာနော်..မသေချာဘူး။ကိုလူပျိုကြီးပြောသလို error message လေးအစုံတင်ပေးပါလား။သိတဲ့လူတွေဖြေမှာပေါ့..ဟီး
ဟုတ်ကဲ့ .. အစ်ကို
အခုတော့ မပါလာလို့ .. နောက်အားရင် ပြောပြပါ့မယ်...
အခုလို ကူညီတာ ကျေးဇူးဗျို့ ... အဟတ်
ဘာမေးထားမှန်းကိုမသိလို့ ဘယ်သူမှဖြေကြမယ် မဟုတ်ပါဘူး :d
မေးခွန်းကိုအသေအချာ ပြန်မေးပြီး လက်ရှိဘယ်လို ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အသေအချာပြန်ပြောပြပါ။
မဟုတ်ဘူး .. ကိုလူပျိုကြီးရ
သူပြောတာက ubuntu ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မပြောပြရင် ဘာမှကိုမသိလို့ပါတဲ့ ... အဲ့ဒါ သူ့ကိုကူညီပေးစေချင်တာဗျ..
သူကလည်း ဘာမှလည်းမမေးထားဘူးကော .. ???
ဘာဖြစ်တာလဲ။ ဘယ်သိတာချင်တာလဲ။ အဓိက OS တစ်ခုကို သုံးတယ်ဆိုတာက ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခု ရှိမှ သုံးဖြစ်ကြတာပါ။ ဥပမာ။။ Linux ကိုလေ့လာချင်ရင် Ubuntu က အလွယ်ဆုံးပဲ။ ဒါမှမဟုတ် Windows OS မဝယ်ချင်လို့ Free ရတဲ့ Linux ကို သုံးကြတယ်။ ဘာသိချင်တာ ဘာမှမပြပဲ ဆိုတာက ဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူး။ မေးခွန်းက မရှင်းဘူးဗျ။
Ubuntu မှာ compiz fusion သုံချင်လို ့ပါ....တတ်တဲ ့အစ်ကိုများသင်ပေးကြပါ:*
ကျွန်တော်ကတော့ Ubuntu ကိုဘာလို့သုံးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Interface ကိုကြိုက်တယ်... အဓိကကတော့ Open Source ဖြစ်လို့ပဲ ... နောက်ပြီး Window ထက်စာရင် Linux ကပိုပြီး ကျယ်၀န်းတယ်လို့ခံစားရတယ်... MAC တော့ မသုံးဖူးလို့မသိပေမယ့် Windows7နဲ့ Ubuntu ယှဉ်ကြည့်ရင် Ubuntu ကိုပိုပြီးရွေးချယ်မိတယ်. ... GAME ဆော့တာမှာ နည်းနည်းပြဿနာရှိပေမယ့် တခြားဟာတွေတော့ Windows ထက်သာတယ်လေ... File Transfer Rate ကအစပေ့ါနော်... အဟတ်
Terminal ကနေ သွင်းဖို့အတွက်က
$sudo apt-get install compiz compiz-plugins compiz-gnome compiz-core emerald compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra fusion-icon compizconfig-settings-manager
menu list ထဲမှာ ဘာမှမပါဘူးကော။blank ကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်သုံးတာက lucid lynx ပါ။
synaptic package manager ထဲလည်း ဝင်မပြင်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။
Lucid Lynx uses GRUB 2.
You can't change menu.lst.
Go to synaptic pacakage manager and find linux-image-blar-blar-blar.
Choose completely remove (but leave the last two - recommended)